Qaadista imtixaan mid ah oo laga taageeray Gobolka Banaadir “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Qaadista imtixaan mid ah oo laga taageeray Gobolka Banaadir “SAWIRRO”
Wasiirka Waxbarashada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka qeyb gashay munaasabad lagu soo dhoweynayay go’aanka Wasaaradda ee ah qaadista imtixaanaadka mideysan ee dugsiga sare dalka.
Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Banaadir, ururka haweenka Qaranka, kan gobolka oo kaashanaya Wasaaradda waxbarashada ayaa lagu qabtay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, ayadoo ay goob joog ahaayeen Wasiirka waxbarashada iyo mas’uuliyiin kale.
Munaasabadan oo lagu daahfuray degmooyinka Xamar Jajab iyo Waaberi ayaa intii ay socotay fanaaniinta kooxda Iftin ee Wasaaradda waxbarashada waxa ay goobta ku soo bandhigeen suugaan ay ku cabirayeen qiimaha waxbarashada ay u leeyahay bulshada Soomaaliyeed iyo dhibaatada uu leeyahay jahliga.
Amaal Cabdullaahi Axmed oo kamid aheyd ardayda wax ka barata iskuulka Al-Basiir oo ay wax ka bartaan dadka araga la’ ayaa ka codsatay Madaxda Wasaaradda waxbarshada in ay il gaar ah ku eegaan dadka araga la’ ayna u sameeyaan goobo ay wax ku bartaan.
Guddoomiyaha degmada Waaberi Axmed Muumin Maxamed oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan imtixaanka mideysan ee ka bilaabanaya dugsiyada sare ee bartamaha iyo koonfurta dalka, ayna ka degmo ahaan ka qeyb qaadanayaan dhankooda.
Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baar qab iyo Guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka Qaranka Canab Xasan Cilmi oo ka hadlay munaasabada ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay munaasabada lagu daahfurayo taageeridda imtixaanka mideysan ee ka bilaabanaya dugsiyada sare ee dalka.
Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Cabdicasiis Cilmi Cali ayaa sheegay maamulka gobolka Banaadir uu garab taaganyahay howlaha lagu dar dargelinayo in imtixaan mideysan laga qaado ardayda dugsida sare ee gobollada dalka.
Wasiirka waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta sare Qadro Bashiir Cali oo gabagabadii munaasabada ka hadashay ayaa sheegtay in ay wax weyn ka qaban doonto mideynta manhajka waxbarashada Soomaaliya, isla markaana ay ka shaqeyn doonto sidii ubadka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen waxbarsho lacag la’aan ah, taasi oo ay ka faa’iideysanayaan carruurta aan waalidiintooda awoodin inay geeyaan xarumaha waxbarashad ee sida gaarka ah loo leeyahay.
Qaramada Midoobay oo soo dhaweysay bilowga wejiga labaad e shirka Cadaado ka socda
Dhaqaatiir balan qaaday inay adeegyo caafimaad u fidinayaan muwaadiniinta Yemen ka imaaneysa